Tafiditra ao anatin’ilay tetikasa Miaro izany ka nanaovan’izy ireo fanaraha-maso mahakasika ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’ny kaominin’i Itampolo, Fotadrevo, any amin’ny distrikan’i Ampanihy. Nohamafisin’ny mpandrindra nasionalin’ny Foibem-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo (ONN) fa tsy ho fitsaboana intsony no hatao ka hapetraka ho tanjona ny famolavolana paikady maharitra hanafoanana ny tsy fanjarian-tsakafo. Azo atao tsara ny mametraka paikady maharitra ahafahana manafoana izany eto Madagasikara. Efa nandalo tranga toy izany koa ny tany Korea Atsimo, hoy ny fanazavan’atoa Lim Sang-Woo, masoivohon’ny Korea Atsimo eto Madagasikara. Hiara-kiasa noho izany ny telo tonta mba handraisana an-tanana ny renim-pianakaviana sy ireo zaza mandritra ny arivo andro voalohany iainany. Tsy mijanona eo amin’ny fanentanana mahakasika ny sakafo tokony hohanin’ny reny sy ny zaza, na ny fihetsika tokony hatao fahazarana. Nohamafisin’ity masoivohon’i Korea ity ihany koa ny amin’ny tokony hanatsarana ny lalana sy ametrahana fotodrafitrasa ahazoana tsena manaraka ny fenitra ary sakafo ampy sy feno otrikaina ho an’ireo renim-pianakaviana sy zaza ireo. Efa nisy ihany moa hatramin’izay ny fiaraha-miasa teo amin’ny PAM sy ny KOICA fa hotohizana kosa izany.